I-101 IITATTOOS ZEDRAGONI EZIBALASELEYO ZAMADODA: IZIMVO ZOYILO OLUPHOLILEYO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-101 Iitattoos eziBalaseleyo zeDragoni yamadoda
Ngelixa uninzi lwamadoda lufumana ii-tatoo zenamba kuba zijongeka njenge-badass njengobugcisa bomzimba, abanye abantu baya kuba nomdla wokwazi ukuba iinkcubeko ezahlukileyo zidibanisa iidragons ezinentsingiselo enzulu. Umzekelo, iiTattoos zedrako zaseTshayina zinokumela ubulumko, ubukrelekrele, amandla, uthando kunye nokubawa. Ngapha koko, ngenxa yobungakanani kunye nokumila kwezi zidalwa zasentsomini, kufanele ukuba kungothusi ukuba uyilo lwedrama ye tattoo luqhubeka ezinye zeentlobo ezipholileyo ze-inki emadodeni.
Ngapha koko, ngenxa yokuba zinokuba nkulu okanye zincinci, zilula okanye zinenkcukacha, zimnyama okanye zinemibala, kwaye zidityaniswe ne- ukakayi , ingwe, okanye inyoka, abafana banokucela umculi wabo ukuba abeke umzobo wabo naphina emzimbeni. Apha ngezantsi, siqokelele imifanekiso yezona tattoos ze dragon zibalaseleyo. Nokuba ufuna inamba ingalo , isifuba , umva , ingalo , igxalaba, umlenze , okanye Umvambo womkhono , ezi zimvo ziya kukukhuthaza!
1Eyona Tattoos yeNyoka
1.1IiTattoos ze Dragon zaseAsia
1.2IiTattoos zeDragons yobuhlanga
1.3Inyoka kunye neTiger Tattoos
1.4Inyoka kunye noKhakhayi Tattoo
1.5Inyoka kunye nenyoka Tattoo
MbiniImibono yeTattoo yeNyoka epholileyo
2.1Umkhono weDragle sleeve
2.2Dragon Back Tattoo
2.3Tattoo yesifuba sedragoni
2.4I-Tattoo yamagxa egongqongqo
2.5IiTattoos zeNyoka encinci
3Uyilo oluBalaseleyo lweTattoo
Eyona Tattoos yeNyoka
Xa ucinga ngetattoo zedrako, kulula ukucinga ngamaxesha aphakathi kunye nokuphefumla umlilo izilo zasentsomini, kodwa iidragons ezipholileyo ziza ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuqala, makhe sixoxe ngentsingiselo yenamba!
IiTattoos ze Dragon zaseAsia
Ii-tattoos zedragoni zaseAsia zezinye zezona zintsonkothileyo kuzo zonke zinemisila emide, ejijekileyo. Ngokukodwa iinkcubeko zaseJapan nezaseTshayina zihlala zijonga iidragons njengamakhubalo amathamsanqa anokuzisa abantu amandla, ukuchuma kunye namandla. Kubugcisa bomzimba obuguqulela kubudoda, ukomelela, kunye nobutyebi, iiTattoos zeTshayina lukhetho olufanelekileyo.
IiTattoos zeDragons yobuhlanga
Ukuba ungumntu wokomoya, itrato tattoo yohlobo inokunikezela ngesimboli osifunayo. Umfanekiso wenamba yesizwe umele ukuba umele indalo, ithamsanqa, isibindi, ukongama kunye nozuko olungunaphakade. Uyilo lwedragas yobuhlanga zihlala zimnyama zimhlophe, kodwa uluhlu ngobukhulu kunye nokubekwa.
Inyoka kunye neTiger Tattoos
Ngokwenkcubeko yamaTshayina, iidragons kunye nengwe ziintshaba ezifa. Ngelixa zombini zifanekisela amandla kunye namandla, inamba isebenzisa ubulumko kunye nobuchule bokuliqonda ngcono ilizwe eliyingqongileyo, kwaye ihlosi lisebenzisa amandla nobuqhetseba. Iijoka zaseJapan kunye neet tios zinokuba ngumqondiso omangalisayo womzabalazo wangaphakathi womntu wobuchopho ngokuchasene nokulwa.
Inyoka kunye noKhakhayi Tattoo
I-tattoo yokakayi lwenamba ibonelela ngokuluhlaza kakhulu ekuthatheni umxholo. Ngenxa yokuba ukakayi luhlala lunxulunyaniswa nokufa kunye nentshabalalo, inamba kunye Umvambo wokhakhayi Kuthethwa ukuba ibe yingozi kwaye isongele.
Inyoka kunye nenyoka Tattoo
Njengengwe, kuthiwa iinyoka ziintshaba zeedragons. Kwiinkcubeko ezininzi zakudala, iinyoka kucingelwa ukuba ziyaphilisa ngelixa iidragoni zimele amandla atshabalalisayo endalo. Ukuba ufumanisa ucinga ngokudibana phakathi kwenkolo, inkolelo kunye nesayensi, inamba kunye nenyoka tattoo inokuba ngumsebenzi wobugcisa kuwe.
Imibono yeTattoo yeNyoka epholileyo
Inxalenye yokuza ne-tattoo epholileyo ye-tattoo kubandakanya ukukhetha ukuba ungayifumana phi i-inki, yeyiphi imibala oza kuyisebenzisa, nokuba uyilo lincinci okanye lulula kangakanani na. Amathuba anokuphela ngokwenyani, kodwa ezi mbono zikhethekileyo kufanelekile ukuba ziqwalaselwe.
Umkhono weDragle sleeve
Umzekelo, ekubeni inamba yaseAsia yaziwa ngobude bayo obukhulu kunye nobukhulu bayo, unokucinga ngetravel yomkhono wenamba kunye nomsila ojijekileyo osongelwe ngengalo yakho njengendawo ekugxilwe kuyo. Ngapha koko, ezinye zezona zilo zibalaseleyo zetattoo yoyilo yeengalo kunye neengalo zolule yonke indlela eya egxalabeni, ngasemva kunye nesifuba kwinqanawa enokuthi ihlale kowona msebenzi unzima.
Inamba emva kwetattoo yenye indlela ethandwayo ejongeka yoyikisa kwaye yoyikisa. Abanye abantu baya kukhetha uyilo lomzimba olupheleleyo kwi-inki eludongeni olupheleleyo ngasemva kwabo. Kwangokunjalo, ukuba ukhetha umbono wenamba kunye nengwe, ukuyibeka emqolo kwisitayela sendabuko se-yin-ne-yang - nenamba kwelinye icala kunye nengwe kwelinye - yahlukile kwaye iyakhuthaza.
Tattoo yesifuba sedragoni
Inamba eqhelekileyo tattoo esifubeni ihlala inomsila kunye nomzimba unyuka unyuka ngengalo negxalaba intloko ihleli esifubeni. Ngamanye amaxesha, unokufumana abafana abakhetha iintloko ezibini zedragoni kumacala omabini esifuba sokulinganisa.
I-Tattoo yamagxa egongqongqo
Idrako yegatto tattoo inokwenziwa ngobugcisa i-inki ngapha kwengalo ephezulu, i-bicep, kunye neenxalenye zomqolo kunye nesifuba ukwenza ubugcisa obuhle. Igcisa lakho linokudibanisa namanye amalungu omzimba ukwandisa imizobo ukuba ukhetha ukwandisa umsebenzi.
IiTattoos zeNyoka encinci
Iitattoos ezincinci zedragoni zibalaseleyo kwiindawo ezinjengezandla, izihlahla kunye nemilenze. Njengomzekelo, i-tattoo yentloko yenyoka ejongeka ngathi ibhabha inokuba ilungele indawo encinci yengalo yakho. Kwangokunjalo, inamba yesizwe encinci inokuthi ilingane neyethu isandla isihlahla, intamo okanye ithole.
Uyilo oluBalaseleyo lweTattoo
Ngobuninzi beetattoos zejoka ezimangalisayo zokuba abafana baphonononge, ngaphandle kwamathandabuzo uyakufumana umsebenzi wobugcisa okhuthazayo. Jonga ezi uyilo zetattoo zibabazekayo ukuze ubone ukuba iintlobo ezahlukeneyo zeembono ziya kujongeka kanjani emzimbeni wakho.
ithini inyanga yam nokuphuma
umlenze umkhono tattoo amadoda
amadoda ezinwele ezimfutshane ze-2017
uphawu lwelanga nenyanga
kuthini ukuvuka kwam
usapho lokuqala tattoo esifubeni